सहयोग को लागि हार्दिक अनुरोध..........!!! | Jukson
सहयोग को लागि हार्दिक अनुरोध..........!!!
सिर्दिबास-८,फिदिम निवासी बर्ष १०का सपना गुरुङ हाल सहयोगी हातहरुको पर्खाईमा छीन। खेल्ने र पढ्ने उमेरमा रोगले च्यापेपछी पढाईलाई थातीराखी उपचारबाट निको हुने दिनको पर्खाइमा छीन।
२०७१ पुसदेखी सिभिल अस्पताल, काठमान्डौमा एप्लास्टिक एनिमिया (Aplastic anemia) को उपचार हुँदै आएपनी अब थप उपचारको लागि इन्डिया लानुपर्ने अवस्था आएको छ। हालसम्म आफ्नै ब्यक्तिगत खर्चमा उपचार गर्दा गर्दै १२ लाखभन्दा बढी खर्च भईसकेकोले घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदै गएको सपनाकी आमाले बताउनुभयो। अब थप उपचार अर्थात बोनम्यारो प्रत्यारोपण (Bonemarrow transplantation) को लागि २० लाख भन्दा बढी लाग्ने भएको छ। तसर्थ सपनाको जिबन
बचाउनको लागि अब उपकारी अनी मनकारीहरुको सहयोगको खाचो छ। स्मरण रहोस्, सपना पढाई अनी न्रित्य दुबैमा अब्बल छीन र सानै उमेरमा यिनले धेरै सामाजिक कामहरुको लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलनकमा पनी सहयोग पुर्याएकी थिइन। आज उनै सानी नानीको जिबन बचाउनको लागि हामी सबैको सहयोगको खाचो छ। तपाईं को सानो सहयोग ले यी सानी नानी को जीवन बाँच्न सक्छ। तसर्थ यहाँहरु सबैमा सक्दो अर्थिक सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सहयोगको लागि
इन्भेस्टमेन्ट बैंक गोङगबु शाखा, काठमान्डौमा रहेको
खाता ०२१०५१५००१९५२१ (02105150019521) मा जम्मा गर्न
सक्नुहुनेछ। कृपया नगदजम्मा गरिसकेपछी एकपटक ९७४६०५२४४९
(कालीमाया गुरुङ, सपनाकी आमा) मा जानकारी
गराउनुहोला ।हामी यहाँहरुको नाम तथा ठेगाना पनि
उपयुक्त माध्यमहरुबाट सार्वजनिक गर्नेछौ । धन्यवाद l
टिकापुर भिडन्तमा पाँचजनाको मृत्यु
डुङ्गा दुर्घटनामा १९३ जना बेपत्ता,४ को मृत्यु र चालक पक्राउ
दलितका अधिकार कटौती भएको विरोधमा कास्कीका दलितहरुले आन्दोलन चर्काउने